Enkosi ngalo lonke uthando lwam Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Akukho nto ilunge kobu bomi ngaphandle kokuziva uthandwa. Ukuba le yimeko yakho, ungaze ulibale ukubulela zonke iinkcukacha iqabane lakho elinalo nawe, ukukunceda nazi ezinye izimvo zomyalezo onokuzithumela. Le miyalezo yombulelo kwiqabane lakho inokuthunyelwa nangaluphi na usuku, musa ukuzibophelela kumnyhadala othile. Ndithembe, iqabane lakho liza kuziva likhetheke ngakumbi ukulifumana ngenye imini kunaso nasiphi na isizathu esibonakalayo.
1 Enkosi ngako konke uthando lwam
2 Ndonwabile ecaleni kwakho, uthando
3 Amabinzana ethenda ukubulela uthando lweqabane lam
4 Enkosi ngazo zonke iividiyo zothando lwam
Ndiyabulela ebomini ngokundinika ithamsanqa lokukufumana. Ndiyathembisa ukwenza konke okusemandleni akho ukukwenza wonwabe kwaye ndikunike nenkxaso efanayo endiyifumana kuwe.
Akusayi kubakho mazwi anokubonisa uxabiso olukhulu endiva ngalo kuwe ngokundinika uthando lwakho.
Ndiyabulela kulo lonke uthando olukhulu ondinike lona, ​​ndiziva ndonwabile kakhulu kunye nawe. Into ondenzela yona iyamangalisa, ndiyakuthanda ngaphezu kwakhe nabani na apha emhlabeni.
Enkosi ngazo zonke iinkcukacha ezintle onazo nam, ungoyena ubalaseleyo ebomini bam.
Ndinethamsanqa ukuba nawe ecaleni kwam. Ungoyena mntu ubalaseleyo emhlabeni, enkosi ngobukho bakho. Andiyi kuze ndikutyeshele, enkosi.
Ndiyabulela kuwe ngokuba umphelelisi endinqwenela ubomi bam. Ndiyakuthanda Busi.
Uyilento bendisoloko ndiyifuna. Ndiyabulela ngobukho bakho nayo yonke into ondenzela yona.
Enkosi ngokuba yintombi yam. Ndiyakuthanda
Andikwazi ukubulela ngokwaneleyo ngokubeka umbala ebomini bam. Ungaze usilele kum!
Ndiyazibulela zonke iinkcukacha onazo kunye nam. Ungogqibelele!
Ndonwabile ecaleni kwakho, uthando
Ndikuthanda ngomphefumlo wam wonke nangentliziyo yam kwaye ndinamagama kuphela ombulelo kuwe kuba kuba sihlangene kwaye ngoku sithembisene, ndiziva ndingoyena mfazi wonwabileyo emhlabeni Enkosi sithandwa.
Sithandwa sam, ulonwabo lwam lubonakala kuyo yonke into endiyenzayo kwimihla yam yosuku kwaye oko kukubulela kuwe. Ukusukela oko sathembisanayo, akukabikho suku apho kungasekho noncumo olunye kunye newaka, olwakho, usapho lwam kunye nawo wonke umntu okufutshane, nkqu nasemsebenzini, kwaye kungenxa yokuba undinika uthando oluninzi. Ndiyakuthanda
Ndingambulela njani uThixo ngesoka endinalo, lindibeka kwindlela yomntu olungileyo ondinceda ndikhule njengomntu imihla ngemihla. Ndingabulela njani sithandwa sam ukuba yonke into oyaziyo kukundinika uthando olungaka kunye neenkcukacha ezininzi ezenza ukuba ndonwabe kakhulu?
Kuyinyani ukuba amagama awanzima kwaye amaxesha amaninzi sibulela umkhwa kwaye kuba singabantu abafundileyo, kodwa umbulelo wam ukongeza ekubeni nezi mpawu sele zichaziwe zisuka entliziyweni. Ndiyabulela, sithandwa, ngokundonwabisa. Ndiyakuthanda
Amabinzana ethenda ukubulela uthando lweqabane lam
Ndinokuninzi ukubulela ebomini, kangangokuba ngamanye amaxesha ndiyoyika ukonwaba okungaka ngaphandle kwawo bendingazi ukuba mandithini. Ndinosapho oluhle olusoloko lundixhasa kwaye namhlanje ndinomfana endijongileyo ondijonga nje andenze ndibone indlela andithanda ngayo. Ndiyabulela uthando lwam ngokuba yinxalenye yobomi bam.
Ubuncwane bam obuncinci nobumnandi, ukwazi nje ukuba usecaleni kwam nayiphi na imini engwevu ngesiquphe kuyakhanya, wenza iintsuku zam zisoloko zibalele kwaye ziba neentyatyambo kuba oko sikwenza yonke into eyinxalenye yendalo iye yabonakala ngakumbi ukwenzela mna. Enkosi ngako konke, Babe.
Nguwe kuphela umntu ondazi kakuhle kwaye ndabelana naye ngobomi bam, ungaze ulibale ukuba ndiyakuthanda.
Ungomntu obaluleke kakhulu ebomini bam, enkosi ngokuba yinxalenye yobukho bam.
Akukho mntu uya kukuthanda njengam, kuba akukho mntu waziyo ukuba ndiyazi.
Ndihleli ixesha elininzi nawe, yiyo loo nto ndikuthanda ngokuba kunye nam kwasekuqaleni.
Ndifuna uhlale ukhumbula ukuba ndiyakuthanda kwaye kungenxa yokuba uhlala ukho kum.
Uya kuhlala ulolona khetho lubalaseleyo ebomini bam, enkosi ngokundikhetha nam.
Ukususela kumzuzu endikukhethileyo, bendisazi ukuba ndiza kwabelana nawe ngobomi bam bonke.
Ungulomntu ndifuna ukukubona yonke intsasa xa ndivuka, ndiyakuthanda.
Ungoyena mntu ndimthanda kakhulu, ungowamaphupha am kodwa eyona nto intle kukuba ndinayo kwinyani yam.
Ubomi bundinike isipho esikhulu kwaye ibinguwe, esona sipho sikhulu sindizalisa ngolonwabo yonke imihla.
Uya kuhlala unam ngenxa yakho, ndiya kuhlala ndincuma ngenxa yakho kwaye ndiya kuhlala ndithanda wena kuphela.
Enkosi ngazo zonke iividiyo zothando lwam